Portable masoja Analyzer
Zvirwere Disease chirwere Kit
Digstive Tract chirwere Kit
Respiratoria System chirwere Kit
Kemikari chirwere Kit
Kuzvimba chirwere Kit
Tumorigenesis chirwere Kit
Chirwere Kit (Colloidal G ...
Chirwere Kit nokuti D-Dimer ...
Chirwere Kit (LATEX) nokuti rotavirus Group A For ezvokunambira kunze kwomuviri waamai chirwere kushandiswa chete Tapota verenga pasuru iyi pinza nokungwarira asati kushandisa uye mukanyatsochengeta kutevedzera mirayiridzo. Rakavimbika munhu akaidza zvabuda hazvigoni akavimbisa kana paine chero zvarakasiya kubva nemirayiridzo iri pasuru muwedzero. Aida SHANDISA chirwere Kit (LATEX) nokuti rotavirus Group A zvakakodzera Qualitative kuziva miedzo rotavirus Group A antigen kwevanhu fecal ivhu. bvunzo izvi zvichiitirwa kuti nyanzvi pane zveutano isu ...
Chirwere Kit (LATEX) nokuti rotavirus Group A uye adenovirus For ezvokunambira kunze kwomuviri waamai chirwere kushandiswa chete Tapota verenga pasuru iyi pinza nokungwarira asati kushandisa uye mukanyatsochengeta kutevedzera mirayiridzo. Rakavimbika munhu akaidza zvabuda hazvigoni akavimbisa kana paine chero zvarakasiya kubva nemirayiridzo iri pasuru muwedzero. Nechinangwa SHANDISA chirwere Kit (LATEX) nokuti rotavirus Group A uye adenovirus zvakakodzera Qualitative kuziva miedzo rotavirus Group A uye adenovirus antigen kwevanhu fecal ivhu. Izvi Te ...
Chirwere Kit (Colloidal Gold) kuti IgM Antibody kuna Human Enterovirus 71 Nokuti ezvokunambira kunze kwomuviri waamai chirwere kushandiswa chete Tapota verenga pasuru iyi pinza nokungwarira asati kushandisa uye mukanyatsochengeta kutevedzera mirayiridzo. Rakavimbika munhu akaidza zvabuda hazvigoni akavimbisa kana paine chero zvarakasiya kubva nemirayiridzo iri pasuru muwedzero. Aida SHANDISA chirwere Kit (Colloidal Gold) kuti IgM Antibody kuna Human Enterovirus 71 ari colloidal goridhe immunochromatographic munhu akaidza nokuda Qualitative kutsunga IG ...